कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदेश १ को अवस्था (चैत ३० गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरससम्बन्धी प्रदेश १ को अवस्था (चैत ३० गते)
मोरङ ०७६ चैत ३० गते
प्रदेश १ का १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहमा कोभिड-१९ विरूद्ध अभियानहरू सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ०७६ चैत ३० गतेसम्ममा कोरोना भाइरससँग लड्न ४ हजार ४ सय ११ जना बस्न मिल्ने क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिएको छ । प्रदेशभरी ४ सय ३२ वटा आइसोलेशन बेडको व्यवस्था गरिएको छ । ४४ वटा आइसीयु बेड तयार गरिएको छ ।
प्रदेश १ मा यस अवधिमा २ सय २२ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । जसमा १ सय ९० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ र ३२ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । चैत ३० गतेसम्म प्रदेश १ मा ५४ जना महिला र ५ सय ३६ जना पुरुषसहित ५ सय ९० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ४ सय ५५ जना बसेका छन् । प्रदेशभरी ६ सय जना महिला र २ हजार ८ सय ५५ जना पुरुष होमक्वारेन्टाइनमा बसेको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा चैत ३० गतेसम्म २ सय ६३ को र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) गरिएको छ । २ सय ६३ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि नेत्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार चैत ३० गतेसम्म मोरङमा १ सय ६२ जना पुरुष र १४ जना महिला गरी १ सय ७६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार १७ ओटा स्थानीय तह रहेको मोरङमा १६ ओटा स्थानीय तहका ८० हजार ५ सय ५३ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । रतुवामाई नगरपालिकामा राहत वितरण भएको छैन । मोरङमा १० ओटा स्थानीय तह र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँले २५ गरी चैत ३० गतेसम्म ६ सय ९३ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । मोरङमा १ सय २७ ओटा आइसोलेशन बेड तयार गरिएको छ । आइसीयु बेड २८ ओटा रहेका छन् । मोरङमा चैत ३० गतेसम्म १ हजार १ सय २३ जना पुरुष र २ सय ४५ जना महिला गरी १ हजार ३ सय ६८ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । मोरङमा ६३ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ६३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । मोरङमा ४१ जनाको र्‍यापिड डायग्नोष्टिक टेस्ट (आरडिटी) गरिएको छ । आरडिटी गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ज्ञानबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कोशी अस्पताल कोभिड -१९ उपचार केन्द्रलाई राउण्ड टेवलले आईसीयु बेड हस्तान्तरण गरेको छ । विराटनगर राउण्ड टेवल नम्बर ५ र काठमाडौँ मेट्रो राउण्ड टेवल नम्बर ४ ले संयुक्त रूपमा दुई ओटा आइसीयु बेड प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । विराटनगर राउण्ड टेवल नम्बर ५ का अध्यक्ष अश्विनी वंशलले २ लाख रुपियाँ बराबरको दुई ओटा बेड मन्त्री घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । आइसीयु बेड ग्रहण गर्दै मन्त्री घिमिरेले विभिन्न अस्पतालबाट बेडहरू ल्याएर सेवा सुरु गरिएपनि अहिले विभिन्न दातृ संस्थाहरूबाट उपचार केन्द्रका लागि सहयोग जुट्दै गएको बताउनु भयो । अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ल्याइएका बेडहरू फिर्ता गरिँदै लैजाने पनि उहाँले बताउनु भयो । आइसीयु बेड हस्तान्तरण कार्यक्रममा लायन्स क्लव ३२५ ए वानका सेकेण्ड भाइस डिष्ट्रिक गर्भनर रेवतबहादुर कार्की, कोशी अस्पताल विराटनगरकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संगीता मिश्रा लगायतको उपस्थित रहेको थियो । यसअघि कोभिड-१९ उपचार केन्द्रलाई प्रदेश १ का विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले १३ लाख रुपियाँ बढीको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । झापा चारपानेको साहारा नेपालले उपचार केन्द्रमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी उपचार गराउन आउन सक्ने बिरामीका लागि भनेर ४ लाख रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियो ।
कोशी अस्पताल विराटनगरलाई भेन्टिलेटरसहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । सर्लाहीको हरिवनस्थित बागमती सेवा समाज र काठमाडौँको आड्रा नेपालले अस्पतालकी मेसु डा. संगीता मिश्रालाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । आड्रा नेपाल र बागमती सेवा समाजको साझेदारीमा कोशी अस्पताललाई ५५ लाख रुपियाँ बराबरको एक थान भेन्टिलेटर र अप्रेसन थिएटरका लागि ७० प्रकारका विभिन्न उपकरणसहित एन-९५ मास्क हस्तान्तरण गरिएको आड्रा नेपालकी अध्यक्ष सृष्टि लामिछानेले बताउनु भयो । कोशी अस्पतालमा सञ्चालित 'महिला स्वास्थ्य र प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना' अन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको अध्यक्ष लामिछानेले बताउनु भयो ।
कटहरी गाउँपालिका-३ का १ सय ५० परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ । कटहरी गाउँपालिका-३ को कामत टोल, राजवंशी टोलसहित पासवान र मण्डल टोलका लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरिएको हो । ती टोलका विपन्नलाई चामल साढे १२ किलोसहित दाल, नुन तेल, आलु र साबुनलगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो ।
केराबारी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कोरोना राहत कोषमा नेपाली कांग्रेस केराबारीले १ लाख २५ हजार रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीलाई १ लाख २५ हजार रुपियाँको चेक केराबारी कांग्रेसका सभापति प्रकाश बस्नेतले हस्तान्तरण गर्नुभयो । गाउँपालिकाले एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरणलाई तीव्रता दिएको छ ।
बेलबारी नगरपालिका भित्र लाग्दै आएका सबै खाले मेलाहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कोरोना रोग रोकथाम बेलबारी नगर समन्वय समितिले नगर क्षेत्रभित्र लाग्ने सबैखाले मेला, चार्डपर्व र जमघट रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरस सङक्रमणको जटिल परिस्थितिमा पनि अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ मोरङले आग्रह गरेको छ । सङ्घले चैत ३० गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सवालमा गरिरहेका कार्यहरूको प्रशंसा गरेको छ ।
इन्सेक तेहृथुम जिल्ला प्रतिनिधि भगिश्वर लिम्बूका अनुसार चैत ३० गतेसम्म जिल्लामा १ सय २० जना क्षमता भएको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । म्याङलुङ नगरपालिकामा तयार गरिएको क्वारेन्टाइनमा २० जना, फेदाप गाउँपालिकामा २३ जना, मेन्छ्यायेम गाउँपालिकामा दुई जना र आठराई गाउँपालिकामा सात जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । जिल्ला अस्पतालमा निर्माण गरिएको १० बेडको आइसोलेशनमा दुई जनालाई राखिएको छ । उनीहरूको स्वाब परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमित तथा सङ्क्रमण आशङ्का गरिएका बिरामीको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि चैत ३० गते सम्पन्न बैठकले म्याङलुङ नगरपालिकाले ३० लाख रुपियाँको कोष स्थापना गरेको छ । फेदाप गाउँपालिका र आठराई गाउँपालिकाले कोष स्थापना गरेका छन् ।
इन्सेक उदयपुर जिल्ला प्रतिनिधि भरत खड्काका अनुसार कोरोना भाइरस आशङ्कामा स्वाब परीक्षणमा पठाइएका उदयपुरका थप २६ जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । नेपाली सेनाको १८ नं. बाहिनी मातहतको रणशार्दूल गण बेलसोत क्याम्पको क्वारेन्टाइनमा राखिएका २६ जनाको रिपोर्ट चैत ३० नेगेटिभ आएसँगै स्वाब परीक्षणमा हालसम्म पठाइएका ३९ जनाकै रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ ।
बिरामी सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाले हालसम्म जिल्लामा सङ्क्रमण देखा नपरेको प्रमुख सुवेदीले बताउनु भयो ।
स्वाब परीक्षण र प्रारम्भिक चरणको परीक्षण रिपोर्ट दुवैलाई मिलाउँदा हालसम्म ६१ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । चैत २९ गते मात्र २२ जनाको र्‍यापिड डाइनोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) किट मार्फत रगत परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको हो । तर र्‍यापिड टेस्टमा कहिले काहीँ फरक पनि आउने भएकाले २२ जना मध्ये केहीलाई पुनः स्वाब परीक्षण गरिने बताउनु भयो ।
आरडिटी किट जिल्लामा उपलब्ध भएपछि स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र सम्बन्धित स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले क्वारेन्टाइनमै पुगेर परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सुवेदीले बताउनु भयो । टोलीले रौतामाई गाउँपालिकाको मुर्कुचीका चार जना, आँपटारका चार जना, चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका ६ जना र त्रियुगा नगरपालिकाको मोतीगडाका आठ जना गरी २२ जनाको रगत परीक्षण गरेको थियो ।
इन्सेक झापा जिल्ला प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार चैत ३० गतेसम्म झापाका १५ ओटा स्थानीय तहमा २७ ठाउँमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । ७ सय ४१ जना क्षमता भएको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । चैत ३० गतेसम्म क्वारेन्टाइनमा १ सय ९३ जनालाई राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा १ हजार ४१ जनालाई राखिएको छ । मेची अञ्चल अस्पतालमा २५ बेडको आइसोलेशन निर्माण गरिएको छ । जसमा सात जनालाई राखिएको छ । झापामा चैत ३० गतेसम्म १२ जना बिरामी भर्ना भए, नौ जनाको स्वाब परीक्षण भएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । झापामा ३० जना डाक्टर, १ सय ३३ जना नर्स, २२ जना ल्याव टेक्निसियन, ८७ ओटा सुरक्षा दल, ६३ जना स्वयम्सेवक र १ सय २१ जना सहयोगी परिचालन गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ०७७ साल वैशाख महिनाको सेवा सुविधा बापतको १० लाख ५० हजार ३ सय ९० रुपियाँ कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने भएका छन् । सो रकम लकडाउनका कारण काम गर्न नपाएका मजदूरहरूलाई खाद्यान्न वितरणका लागि खर्चिने उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीको बताउनु भयो ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले एक महिनाको सेवा सुविधा बापतको ३ लाख ११ हजार ३ सय रुपियाँ अति विपन्न नागरिकलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने बुद्धशान्तिका अध्यक्ष टिका पाठकले बताउनु भयो । जनप्रतिनिधि २९ जनाकै एक महिनाको सेवा सुविधा गाउँपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर भित्रका अति विपन्न नागरिकलाई वितरण गर्न चामल व्यवस्थापन गरेको छ । नगरपालिकाले १६ सय ५० क्वीनटल खरिद गरी विपन्न परिवारलाई वितरण गरिने अर्जुनधारा नगरका कोभिड-१९ सामाग्री खरिद, आपूर्ति प्याकेजिङ्ग र वितरण समितिका सचिव तिवेन्द्र अधिकारीले बताउनु भयो । नगरपालिकाले प्रत्येक परिवारलाई १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी नुन, १ लिटर तेल वितरण गर्ने उप-प्रमुख कमला खतिवडा (आचार्य) ले बताउनुभयो ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिका -१ का किसानले लगाएको लाखौँ मूल्य बराबरको तरबुजा लकडाउन भएपछि बगरमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । कनकाई माईको बगर क्षेत्रमा लगाएको तरबुजा समयमै बजारमा पुर्‍याउन नसक्दा किसानलाई लाखौं रुपियाँ क्षति हुने भएको छ । वैशाखको पहिलो सातासम्म बजारमा पुर्‍याउने खरबुजा कुहिने अवस्थामा पुगेको हो ।
इन्सेक ताप्लेजुङ जिल्ला प्रतिनिधि देवराज गुरुङका अनुसार चैत ३० गतेसम्म जिल्लामा १ सय ७४ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । १४ बेडको आइसोलेशन कक्ष बनेको छ । चैत ३० गतेसम्म जिल्लामा तीन जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । चैत ३० गते एक जनाको स्वाब परीक्षणका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर पठाइएको छ । जरोका कारण तमोर अस्पतालमा भर्ना भएकी महिलाको स्वाब पठाइएको निमित्त स्वास्थ्य प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताउनु भयो । प्रदेश १ सरकारले जिल्लामा पठाएको र्‍यापिड परीक्षण किट (आरडीटी) चैत २९ गते जिल्लामा प्राप्त भएको थियो । १ सय २० थान किट प्रदेश सरकारले पठाएको हो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल ढप्याव्सन) ताप्लेजुङले ५० हजार रुपियाँ फुङलिङ नगरपालिकाले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गरेको छ । चैत ३० गते कोषमा रकम जम्मा गरिएको प्याव्सन अध्यक्ष दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
जिल्लास्थित नौ ओटै स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट कोरोनाको बारेमा जनचेतनामुलक सामग्री प्रसारण गरेका छन् । लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न अनुरोध गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित अति आवश्यकीय काम गर्न परे स्थानीय तहको व्यक्तिको नाम र फोन नम्बर सार्वजनिक गरेका छन् ।
इन्सेक सुनसरी जिल्ला प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवका अनुसार वैशाख १ गते मनाइने सिरूवा पर्व प्रभावित भएको छ । तराई मधेसमा हर्सोल्लासका साथ मनाइने सिरूवा पर्व प्रभावित भएको हो । नयाँ वर्षसँगै मधेसी र थारू समुदायले मनाउने सिरूवा पर्व मनाउने गर्दछन् ।
जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बजारमा कालोबजारी र मूल्य वृद्धि भएको छ । लकडाउनको मौकामा कालोबजारी र मूल्य वृद्धि भएको हो । भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्र देवानगञ्जसहित भुटाहा, हरिनगर, साहेवगञ्ज, कप्तानगञ्ज, चिमडी, लौकही, भोक्राहालगायतका बजारमा कालोबजारी बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलले भने कालोबजारी र महङ्गी बारेमा अनुगमन भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरूले समेत अनुगमन गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई समेत सक्रिय बनाइएको बताउनु भयो ।
इन्सेक पाँचथर जिल्ला प्रतिनिधि मङ्गल बेघाका अनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथामका लागि प्रदेश १ सरकारले सुरुआत गरेको र्‍यापिड डाइनोष्टिक टेष्ट चैत २९ गतेदेखि पाँचथरमा सुरु भएको छ । प्राविधिक टोली आइपुगेपछि चैत २९ गतेदेखि इलाम र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको सीमनामा अवस्थित राँकेबजारबाट टेष्ट सुरु भएको हो ।
पहिलो दिन विदेशबाट आएका सात जना र स्थानीय एक जना गरी आठ जनाको परीक्षण गरिएकोमा सबैजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्रीले बताउनु भयो । यो अभियान जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत क्रमशः बढाइने जिल्ला समन्व समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताउनु भयो । विदेशबाट चैत १ गतेयता जिल्लामा आएकाहरूको र्‍यापिड टेस्टमार्फत कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण भएको हो ।
विराटनगरबाट तीन जना र जिल्लामा एक गरी चार जना प्राविधिक समूहले परीक्षणको काम गरिरहेको छ । प्राविधिक समूहले क्वारेन्टाइनमा पुगेर परीक्षण थालेको छ । २० मिनेटमा नजिता देखाउने २ सय ओटा किट लिएर आएको प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा आठ ओटै स्थानीय तहले २ सय ४ ओटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छन् । अहिले जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा ६० जना विदेशबाट आएकाहरू छन् । थप आठ जना क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका छन् ।
जिल्लामा चैत ३० गते एक जना महिला र दुई जना पुरुष गरी तीन जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका आठ जना महिला र ४२ जना पुरुष गरी ५० जनालाई घर पठाइएको छ । ५० जनाको र्‍यापिड डाइनोष्टिक टेष्ट गरिएको छ भने होम क्वारेन्टाइनमा राखिएका १८ जना पुरुषको पनि सोही प्रविधिमा मार्फत टेष्ट गरिएकोमा सबैको नजिता नेगेटिभ देखिएको छ । जिल्लामा हालसम्म आठ जना महिला र ६० जना पुरुष गरी जम्मा ६८ जनाको र्‍यापिड डाइनोष्टिक टेष्टमार्फत स्वाब परीक्षण गरिएको छ । जिल्लामा २३ बेडको आइसोलेशन र २ सय ४ जना क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ ।
हिलिहाङ गाउँपालिकाले १ हजार १ सय ३१ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको अध्यक्ष भुवानी लिङ्देनले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले १५ देखि २५ केजीसम्म चामल, दुई केजी दाल, एक केजी नुन, एक लिटर तेल वितरण गरेको छ । कुम्मायक गाउँपालिकाले समेत विपन्न र मजदूर वर्गलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ ।
जिल्लामा तरकारी, फलफूल तथा खाद्य पदार्थको अभाव हुन थालेको छ । बजारको दररेट भन्दा महँगो मूल्यमा उपभोग्य सामग्री खरिद गर्नु परेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक सोलुखुम्बु जिल्ला प्रतिनिधि भोजराज कार्कीका अनुसार चैत ३० गतेसम्म सोताङ गाउँपालिकाले २ सय ३० अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । गाउँपालिका भित्रका विपन्न र ज्यालादारीमा काम गर्ने स्थानीयलाई राहत वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले वडा- १ का ४८, वडा-२ का ३४ घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । त्यस्तै वडा-३ का ३७, वडा-४ का ४० र वडा-५ का ७१ जनालाई राहत वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहत प्याकेजमा २५ केजीको एक बोरा चामल, ३ केजी दाल, २ केजी नुन, २ लिटर खानेतेल र साबुन रहेको छ ।
महाकुलुङ गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने फेस शिल्ड उत्पादन गरेको छ । कोरोनाको शङ्का लागेका व्यक्तिहरूको चेकजाँच गर्नका लागि प्रयोग गरिने फेस शिल्ड १ सय थान उत्पादन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक हरिप्रसाद आचार्यका अनुसार लकडाउनको समयमा सामग्री खरिद र ढुवानीमा समस्या आइरहेको समयमा प्लास्टिक, पि र्फम र टेपको सहायताबाट स्थानीय स्तरमै फेस शिल्ड उत्पादन गरिएको हो ।
इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार चैत ३० गतेसम्म चैनपुर नगरपालिका-१ का ४५ वर्षीय पुरुष र खाँदबारी कारागारका एक जना कैदीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । ३० गते जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा जरो क्लिनिकमा १९ जना महिला र २५ जना पुरुषले जाँच गराएका छन् ।
दुई साताअघि भारतबाट आएका चैनपुरका एक व्यक्तिको रगत परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमै कोरोना भाइरस परीक्षण हुने भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न किट उपलब्ध गराएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म १ सय २७ बेडको क्वारेन्टाइन र १६ बेडको आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा छन् ।
कोभिड-१९ को सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चैनपुर नगरपालिकाले ६ लाख ४६ रुपियाँको कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको छ । लकडाउनको कारण खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री आवश्यक पर्ने भएका कारण नगरपालिकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क चैनपुरमा राहत कोष स्थापना गरिएको नगर प्रमुख भरत खत्रीले बताउनु भयो । राहत कोष स्थापनाका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा सुविधा कटौती गरेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै खाँदबारी नगरपालिकाले पनि कोरोना राहत कोष स्थापना गरेको छ ।
कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रयोग गर्ने पीपीई सहितका स्वास्थ्य सामग्री पूर्व खानेपानी मन्त्री दीपक खड्काले जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहलाई दिनुभएको छ । ३० गते चैनपुरमा जिल्ला समन्वय प्रमुख सुमन शाक्यलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । पूर्वराज्यमन्त्री खड्काले ६५ थान पीपीइ सेट, १ सय २५ थान साधारण पीपीई, ६० लिटर सेनिटाइजर, ६ हजार थान सर्जिकल मास्क, १ हजार २ सय थान सर्जिकल ग्लोव्स उपलब्ध गराउनु भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शाक्यले बताउनु भयो । त्यस्तै नेपाली जनसम्पर्क समिति जर्मनीबाट समेत स्वास्थ्य सामग्री आठ थान पीपीई सेट, सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क र १ सय थान सर्जिकल ग्लोव्स उपलब्ध गराएका छन् । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका नाका बन्द गरेर नाकामा स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्प डेक्स स्थापना गरेका छन् ।
इन्सेक भोजपुर जिल्ला प्रतिनिधि गणेश विष्टका अनुसार चैत ३० गतेसम्म जिल्लामा ३० जना पुरुषलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । पाँच जना महिला र आठ जना पुरुषलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । अहिलेसम्म ३२ आइसोलेशन कक्ष निर्माण गरिएको छ । जिल्लामा क्वारेन्टाइनको क्षमता ३ सय ५८ जनाको छ । जिल्लाका विभिन्न नाका तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ७८ वटा हेल्थडेक्स स्थापना गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा २२ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । गाउँपालिकाले पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयमा आवश्यक सुविधा सहितको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले दुई ओटा आइसोलेशन बेड तयार गरेको छ । गाउँपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन लकडाउन चलिरहँदा भोजपुर सदरमुकाम र आसपासमा सञ्चालित औषधि पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जिल्ला सदरमुकाम र आसपासमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको हो । औषधि पसलहरूको अवस्था र म्याद नाघेका औषधिहरूका विषयमा जानकारी लिन अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । भोजपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गरिएको छ । सदरमुकाममा सञ्चालित आठ ओटा फार्मेसीमा अनुगमन भएको छ । अनुगमनका क्रममा टोलीले केही म्याद सकिएका औषधि पाइएको, तीन ओटा फार्मेसीलाई लाइसेन्स लिएर मात्र बेच्न निर्देशन गरेको, नवीकरण नगरेका चार ओटा फार्मेसीलाई नवीकरण गरेर मात्र औषधि विक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लकडाउनको अवज्ञा गर्दै आफुखुशी हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारण र सवारीसाधनको आवतजावतमा कमी नआएपछि भोजपुर प्रहरीले सचेतनामूलक 'प्ले कार्ड' अभियान अघि बढाएको छ । बन्दको आव्हान गरिए पनि सर्वसाधारण र सवारीसाधन चल्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले सचेतनामुलक प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्न थालेको हो । सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला बन्दको अवज्ञा गर्ने सर्वसाधारण र सवारी धनीलाई सचेत गराउन यो अभियान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका इन्स्पेक्टर प्रदीप तामाङले बताउनुभयो ।
इन्सेक इलाम जिल्ला प्रतिनिधि कोकिला ढकालका अनुसार इलामका भारतीय सीमाक्षेत्रमा हुने आउ-जाउलाई पूर्णतः ठप्प बनाउने निर्णय भएको छ । जिल्लामा चैत ३० गते बसेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम समितिको बैठकले पूर्वी भारतीय सीमामा भइरहेको कडाइलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । लकडाउनको अवधिभर भारतीय सीमा क्षेत्रमा कसैलाई पनि आउ-जाउ गर्न नदिनेगरी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सीमा नाकाका खुला क्षेत्रमा समेत थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सफल पोर्तेलले बताउनु भयो । इलामका क्वारेन्टाइनमा अहिले सम्म १२ जना पुरुषलाई राखिएको छ ।
इलामका स्थानीय तहले राहत वितरणको कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गरिसकेका छन् भने केहीले सुरु गर्नै बाँकी छ ।
रोङ गाउँपालिकाले ४ सय ७३ परिवारलाई र देउमाई नगरपालिकाले २ सय ६८ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छन् । रोङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको २० लाख रुपियाँ राहत बाँड्ने तयारी गरिएपनि दाताहरूकै सहयोगले राहतको खर्च जुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष समशेर राईले बताउनु भयो । देउमाई नगरका प्रमुख सूर्य पोख्रेलले सङ्घीय सरकारले तोकेकै मापदण्डअनुसार राहत बाँडिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगरमा आउँदो तीन महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न र औषधि जोहो भइसकेको भन्दै अहिलेसम्म विपद् व्यवस्थापन कोषबाटै रकम खर्च भइरहेकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट चन्दा उठाउनु नपरेको जनाउनुभयो । देउमाई नगरको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० लाख रुपियाँ विनियोजित छ ।
इलाम नगरपालिकाले पनि स्थानीय तह आकस्मिक राहत कोषमा ४८ लाख रुपियाँ जम्मा गरेको छ । सूर्योदय नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा १७ लाख रुपियाँ जम्मा भएको जनाएको छ । सन्दकपुर गाउँपालिमा चाहिँ विपन्न र असङ्गठित श्रमिकलाई राहत वितरण गर्नेबारे बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताउनु भयो । माइजोगमाई गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ लाख रुपियाँ विनियोजित रहेकामा भर्खरै थप रकम रकमान्तर गरी ३२ लाख रुपियाँ पुर्‍याएको छ । यो गाउँपालिकाले ३ सय ९ परिवारलाई राहत वितरण गरेको लेखा शाखाका प्रदीप नेपालले जानकारी दिनुभयो ।